Ukwaziswa kweThuthi eLawulayo kwi-Analytics yakho? - Buza u-Semalt Yintoni ongayenza
U-Julia Vashneva, u-8 (Semalt uMphathi oyiNtloko uMpumelelo weMathengi, ukholelwa ukuba i-darodar.com iyona sizathu esona sizathu sokuba i-website yakho ithola ininzi yezothutho, kwaye i-forum.topicxxxxxxx.darodar.com inokuchitha idumela lomntu kwi-intanethi kwiintsuku ezizayo. Yingakho kufuneka uzibuze ukuba wenzeni ukukrazula le ngxaki - e cig clearomizer cheap tickets. Ngaba ingumzimba wakho wezitho zomzimba? Kuyinyaniso ukuba uyikopishe kwaye uyifake kwisiphequluli sakho sewebhu. Ngenxa yoko, kubangele iingxaki kwaye bakulethe kumaphepha e-Aliexpress (inkampani ephethwe ngu-Alibaba). Apha uya kubona izinto zeeholide kunye nezibonelelo ezithengiswayo kwinani elikhulu.
Xa kuziwa ukuchofoza umsebenzisi othize kwiziko le-webmaster, kuya kukuzisa kwi-darodar.com, ilandelwe ngokukuqondisa kwiwebhusayithi yaseRashiya eyaziwa ngokuthi iloveitaly.ru. Emva koko, uya kuhanjelwa kwii-subdomains ze-Aliexpress ezineenkalo ezithile ekupheleni "aff_platform = aaf & sk = YNRjYvfmq: & cpt = 1420754856013 & null;."
Unomdla wokwazi intsingiselo yayo? Kuthetha nje ukuba ikhomputer yakho ikhutshwe kwaye iwebhusayithi yakho ithola i-darodar.com yokuthunyelwa kweendlela..Ngona xa uthengisa iinkqubo kunye neprogram, iziphumo aziyi kuba njengoko kulindelwe kwaye ukuhanjiswa kweendlela kuza kubonakalisa kwi-akhawunti yakho ye-Google Analytics. I-hacker ingazama ukuqhuba i-traffic ephantsi kwi-website yakho ngethemba lokuba umntu uza kuthengisa iimveliso kwiikhonkco ezibhekiselelwe kuyo. Indlela abahlaseli beba ngayo ulwazi lwakho baze bafike kwiGoogle Analytics yakho? Impendulo elula kukuba baye bahamba ngeendlela. Kukho iindlela ezahlukeneyo ze-faker zepramm spammers ezisetyenziselwa ukukhohlisa abasebenzisi, ezivumela ukuba zithumele iindawo ezimbi kwaye zichithe idumela lakho. Uza kubona rhoqo abo bantu ababuxoki kwiGoogle Analytics kuba baqhubeka bekhohlisa abasebenzisi kunye neGoogle ngekota.
Kwimeko enjalo, umnqweno ozama ukungena kwisayithi yakho unokukwazi ukuthengisa into ngokusebenzisa ikhonkco yakhe kwaye unokuvelisa imali eninzi. Ngelishwa, abathengisi basebenzisa i-darodar.com yokuthunyelwa kweendlela kunye neprojekthi yokukhohlisa ukukhuthaza iimveliso zakho. Bafuna ukuguqula iindwendwe zabo kubaxhasi kwaye bazikhohlise ngeendlela ezininzi. Omnye umzekelo ngu-spam ongapheliyo wenkampani egama linguCenoval.
Eli qumrhu liye lazisa inani elikhulu lokuthunyelwa kweentshukumo kwiindawo ezinobungozi kwaye zisetyenziselwa iifayili kunye ne-malware ngokuphanga iikhomputha zakho. Ithumela izithuthi ezinobungozi kubathengi bayo, kodwa izithuthi ezifanayo ziyabonakala kwiinkqubo zokudlulisa i-darodar.com nazo. Ngaloo ndlela, kufuneka uhlale kude nobabini be-darodar.com kunye ne-cenoval.ru, uqinisekise ukhuseleko lwakho lwewebhu kwi-intanethi.
Ngokuqhelekileyo, indlela efanelekileyo kakhulu, eyona ndlela ifanelekileyo kwaye efikelelekayo yokujongana nale ngxaki idala izihlunu. Ifayile iya kukunceda ukulahla ugaxekile kwidatha yakho ye-Google Analytics. Ngapha koko, ungatshintsha isethingi kwifayile ye .htaccess. Le mihla, i-webmasters isebenzisa zombini le ndlela yokukhetha ukukhusela abahlaseli ukuba bangabi ulwazi lwabo olubucayi. Unokuzama kwakhona ezi zinto zimbini, kodwa ndincoma ukuba wenze izihlungi ezihlukeneyo kwiwebhusayithi nganye. Zama naziphi na ezi ndlela kwaye uqinisekise ukhuseleko lwesiza sakho.